Fandripahana harena voajanahary : raharaha trafika sokatra roa hiakatra fitsarana anio | NewsMada
Fandripahana harena voajanahary : raharaha trafika sokatra roa hiakatra fitsarana anio
Tsy foana ny trafika sokatra hatramin’izao. Na misy aza ireo efa voasazy, “mbola ny sazy ambany indrindra no mihatra”, hoy ny Alliance voahary gasy. Takin’izy ireo ny henjana kokoa ho anatra ho an’ny hafa.
Hiakatra fitsarana anio eny Anosy, ilay Malagasy-Renioney mizaka ny zom-pirenena frantsay. Avy any Ambanja izy ity, ary nividy sokatra fito karazana Kinixys Belliana, tsy fahita raha tsy any an-toerana sy eto Madagasikara, voasokajy ho Annexe II ao amin’ny fenitra Cites. Tratran’ny zandary teny Mahitsy izy, ny 25 novambra 2016, ary naiditra am-ponja vonjimaika. Raharaha faharoa ny hivoahan’ny didim-pitsarana, mikasika ilay zandary sy “consultant” ary olon-tsotra iray, nahatrarana sokatra miisa fito, karazana radiata teny Ampasampito, ny 25 novambra ihany koa.
Ho an’ny filohan’ny filankevi-pitantanana (PCA)-n’ny fikambanana Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto, “isaorana ny fitondram-panjakana niarahana niasa manoloana ny ady amin’ny fandripahana harena voajanahary, tafiditra ao anatin’ny tetikasa Alarm, ho fampiharana ny tena lalàna”.
Ny lalàna farany ambany no nihatra
Na izany aza, tsikaritra fa ny farany ambany ihany no tena mihatra amin’ireo meloka amin’ireo raharahan-tsokatra teo aloha. Singanina amin’izany, raha 5-20 taona ny sazy ho an’ny heloka bevava, fitsofohana anaty faritra arovana sy fakana harena ao anatiny, migadra dimy taona ilay olona tratra tany Mahajanga, niditra an-tsokosoko tanaty faritra arovana Soalala, voasokajy ho heloka bevava. “Tokony ho mafy kokoa ny sazy ampiharina ”, hoy ny PCA-n’ny AVG.
Tsiahivina fa araka ny lalàna, migadra enim-bolana hatramin’ny roa taona ny meloka amin’ny fanaovana trafika harena voajanahary, miampy fandoavana onitra 10-50 tapitrisa Ar. Migadra 5-20 taona kosa ny fitsofohana sy fakana harena anaty faritra arovana, miampy onitra 100-200 tapitrisa Ar.
Sokatra 17 tratra tany Toliara:
Tratran’ny polisy, ny asabotsy maraina teo, ny sokatra17 natao tanaty gony roa nentin’ny lehilahy telo lahy, amin’iny lalana AmbohitraboToliara iny, nandritra ny fisafoana mahazatra fanaon’izy ireo tany Bazaribe. Natsipin’izy telo lahy ny gony raha vao nahita ny polisy izy ireo. Noheverin’ireto farany fa taolam-paty ny tao anatin’ireo gony ireo kanjo sokatra. Notazonina tao amin’ny biraon’ny polisy ireo sokatra ary nalain’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala, ny alatsinainy, naterina any Mangily. Hatreto, tsy mbola hita izy telo lahy.